We.com.mm - အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားကအနုပညာရှင်များ
ကိုရီးယားက celebrities တွေထဲမှာမှ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတဲ့ celebrities တချို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားရိုက်ရင်းနဲ့မှခင်ပြီး၊ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သွားကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတဲ့ celebrities တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူနဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်နေမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်...။
1. Lee Min Ho နဲ့ Jung Il-woo
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲ Lee Min Ho နဲ့ Jung Il-woo တို့က ဟိုအရင်ထဲက အရင်နှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပါ။
2. Jun Ji Hyun နဲ့ Lee Young Ae
အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Jun Ji Hyun နဲ့ ချန်ဂင်လို့စသိခဲ့ကြတဲ့ Lee Young Ae တို့ဟာဆိုရင် ကြော်ငြာ shooting တစ်ခုမှာ စတင်တွေ့စုံခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်က အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာ အခုချိန်ထိပါပဲ။
3. Ji Soo နဲ့ Nam Joo Hyuk
အရင်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်က “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo” မှာလည်း အတူတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ကြမှာပါ။ အခုချိန်ထိလည်း သူတို့နှစ်ယောက်က အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။
4. Lee Jong Suk နဲ့ Kim Woo Bin
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lee Jong Suk နဲ့ Kim Woo Bin ကတော့ “School 2013” ဇာတ်ကားရိုက်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြတာ ခုချိန်ထိ bff တွေလိုပါပဲ။
5. Song Joong Ki နဲ့ Lee Kwang Soo
ကောင်မလေးတွေရဲ့အသည်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Song Joong Ki နဲ့ Lee Kwang Soo ကတော့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့တာ ခြောက်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။
6. G-dragon နဲ့ Taeyang
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်တွေဖြစ်တဲ့ Bigbang အဖွဲ့ဝင် G-dragon နဲ့ Taeyang ကတော့ ငယ်ငယ်လေးထဲက အရမ်းကို ခင်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါတဲ့။ သူတို့ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ friendship ကြီးက အခုချိန်ထိပါပဲ။
7. Kai နဲ့ Taemin
ကောင်မလေးတွေအသည်းစွဲ Kai ကတော့ Shinee အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Taemin နဲ့ bff တွေပါ။
8. Lee Dong-Hae နဲ့ Sandara Park
Super Junior အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lee Dong-Hae နဲ့ 2NE1 အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Sandara Park တို့ဟာဆိုရင် အသက် (၁၀) နှစ်ထဲက ခင်လာခဲ့ကြတဲ့ bff တွေပါတဲ့။
9. Suzy နဲ့ IU
Suzy နဲ့ IU တို့ကတော့ “Dream High” ဇာတ်ကားမှာထဲက အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါ။
10. Kim Jong Kuk နဲ့ Cha Tae Hyun
Running Men ချစ်သူတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်တဲ့ Kim Jong Kuk ကတော့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Cha Tae Hyun အရင်းနှီးဆုံး bff တွေပါတဲ့။
11. Goo Hara နဲ့ Seungri
Kara အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Hara နဲ့ Bigbang အဖွဲ့ဝင် Seungri နဲ့က သူတို့ရဲ့ မွေးရပ်မြေမှာထဲက အကသင်တန်းတူတူတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး၊ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်ချင်းလည်း တူခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်ထဲက အရင်နှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်က အခုချိန်ထိ bff တွေပါပဲ...။
12. So Ji Sub နဲ့ Song Seung Hun
ဂျွန်စောလို့သိထားကြတဲ့ Song Seung Hun နဲ့ So Ji Sub တိုရဲ့ friendship သက်တမ်းဟာဆိုရင် နှစ် (၂၀) ဆယ်ကျော်လောက်ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။
အသက်အငယ်ဆုံး UNICEF ချစ်ကြည်ရေးသံတမန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Stranger Things မင်းသမီးလေး မီလီဘော်ဘီဘရောင်းန်
နိုင်ငံတကာမိုဒယ်အေဂျင်စီနဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတော့မယ့် မြန်မာ Model လေး Beauty သက်သက်သင်း
ဖုံးဖုံးဖိဖိတင်ဖို့ပြောပေမယ့် မဖုံးပဲတင်ပေးလိုက်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သင်ဇာ
အလှဆုံးမျက်နှာလေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှနတ်မိမယ် (၁၀) ယောက်